Ube yistaringi uSterling ewinisa i-England - Impempe
Ube yistaringi uSterling ewinisa i-England
June 13, 2021 Impempe.com
UMBIKO: Mhlengi Josta Dladla
Igoli lokuqala ngqa emiqhudelwaneni emikhulu likaRaheem Sterling lenze i-England yaqala i-Euro 2020 ngokuwola amaphuzu agcwele. I-England ibingakaze inqobe umdlalo wayo wokuvula kwi-Euro ngaphambi komdlalo wangeSonto ntambama la ishaye khona iCroatia.
Ngesikhathi seNdebe yoMhlaba yango-2018 iCroatia yakhipha i-England emzuliswaneni wemidlalo eyandulela owamanqamu. Kodwa ngeSonto ntambama ezikaGareth Southgate beziwulawula umdlalo cishe kuyoyonke inkundla.
IThree Lions ibiwakha amathuba okushaya amagoli kodwa elingqame kakhulu ngesiwombe sokuqala yilelo elitholwe nguPhil Foden. Nokho ibhola lakhe lishaye ipali.
Igoli likaRaheem Sterling lingene ngomzuzu ka-57. Okulandele lapho ukudlala ngamathuba kwabagadli base-England abebegeja izimbuzi. Ukaputeni weqembu, uHarry Kane ube ngomunye obekufanele avalele phakathi igoli lesibili le-England kodwa wadlala ngomsebenzi.
Ngo-2018, iCroatia ibiyiqembu elingcono kune-England kodwa manje izinto sezishintshile. Okungqama kakhulu kwisikwati saseCroatia ukuthi abadlali bayaguga. Kusekhona abanye babasiza leli qembu lithole indodo yesiliva eRussia ngo-2018.
ULuka Modric oseniminyaka engu-35 manje, ugadle zephuka njengoba i-England ibizenzela kuzo zonke izindawo enkundleni.
Emidlalweni elandelayo kuleli qoqo, i-England izodlala okukuqala ngqa umdlalo osemthethweni neScotland eminyakeni engaphezu kuka-20 ngoLwesihlanu. Lamaqembu agcina ukuhlangana kwi-Euro ka-1996. ICroatia yona izodlala neCzech Republic.
Previous Previous post: IRoyal AM seyilidlulisele phambili icala leSekhukhune
Next Next post: Nakhu okungenza uMkhwanazi adonse izinyawo ukujoyina iChiefs